ျမန္​မာ — Steemkr
minnkhant26141 in myanmar
¿လက်ရှိကျောင်းသား? သင့်ရဲ့သင်တန်းဝင်ရောက်ဖို့ Login
အဘယ်ကြောင့်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ? inglésConsejos ubicacionesFranquiciasOportunidades အလုပ်အကိုင်inglésNuestrasသင်ယူခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းများ
အမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲ၏မင်းသားက Wall Street Inglésအာရှသို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်
က Wall Street Inglésတွင် 03/05/2018
သင်ယူက Wall Street Inglésနှင့်အတူလွယ်ကူပြီးပျော်စရာပါပဲ။
ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ပဲ! သငျသညျဟောလိဝုဒ်သင်ယူနေတဲ့တီဗီစီးရီးအရည်အသွေးကိုကြည့်နေစဉ်အင်္ဂလိပ်တခြားသငျခနျးစာယူနိုငျဘယ်မှာရှိသနည်း ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
အင်ျဂလိတီဗီစီးရီးက Wall Street New York မှာနေထိုင်စဉ်ကသူတို့အိပ်မက်တွေကိုပွညျ့စုံလာစေဖို့ကြိုးစားနေလူမျိုး၏အုပ်စုတစုအကြောင်းဟာသဖြစ်ပါတယ်။
17 နိုင်ငံများ၌သုတေသနလုပ်ငန်းအဆိုအရ, ကျောင်းသားများအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရန်ကြိုးစားသောလူကြိုက်အများဆုံးလမ်းအင်္ဂလိပ်တီဗီကိုကြည့်တူသောအလွတ်သဘောနည်းလမ်းများ အသုံးပြု. ဖြစ်ပါသည်, YouTube ကိုသို့မဟုတ် English သတင်းစာများကိုဖတ်ရှု (Morar Inglésသင်ယူသူဝယ်ယူခရီးသုတေသန 2016) ။
အင်ျဂလိသင်တန်းက Wall Street နှင့်အတူ, ကျောင်းသားများကိုသူတို့ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအသံထွက်အမျိုးမျိုးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပျော်စရာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုရုပ်မြင်သံကြား၏စီးရီးကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပျော်စရာဒါပေမယ့်လည်းထိရောက်သောသာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်ကျောင်းသားများအင်္ဂလိပ်နည်းလမ်းက Wall Street ကိုသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်ကူညီသူကိုအရည်အချင်းပြည့်မီအင်္ဂလိပ်ဆရာ, ဆရာမနှင့်အတူအသေးစားသင်တန်းများ join ။
က Wall Street Inglésဟာသဇာတ်လမ်း WSE အတွက်သော့ချက်ကစားသမားတစ်ဦးကိုမတ်လအတွင်းအာရှတိုက်က Wall Street မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စင်တာများတစ်ခရီးစဉ်အပေါ်သူ၏ပရိတ်သတ်များအချို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုမည်။ ကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် နီကိုးလ် Maxali, ဇာတ်ကောင် "Khae" ထိုင်းနိုင်ငံကနေကစားအသက် 20 ဖြစ်ပါတယ်။ Khae ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးလူများ၏ဘဝများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်ဟုထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းဖြစ်သောသူမ၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး, ရှိခြင်း၏အိပ်မက်။
နီကိုးလ် WSE စင်တာများမှာအင်္ဂလိပ်စာကျောင်းသားများအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပေးရမတ်လစဉ်အတွင်းတောင်ကိုရီးယား, ဟောင်ကောင်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်စင်တာများက Wall Street အင်္ဂလိပ်သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။
14, 15, 16 မတ်လ: WSE တောင်ကိုရီးယား 22 ကနေမတ်လ 24: WSE ဟောင်ကောင် Kong28 မတ်လ - ဧပြီလ 1: WSE တရုတ်
နီကိုးလ်ဟာသူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအောင်မြင်ရန်တစ်လမ်းအဖြစ် WSE သုံးစွဲဖို့ကျောင်းသားများနှင့်အလားအလာကျောင်းသားများကိုလာအောင်နှိုးဆွဖို့စိတ်ခွန်အားနိုးစပီကာအဖြစ်သူမ၏အတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒါဟာအစဆိုးလ်, ဟောင်ကောင်, ဘေဂျင်းနဲ့ရှန်ဟိုင်း၏လှပသောမြင်ကွင်းများအချို့ကိုလေ့လာစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်။ nicolemaxali, ကို Global WSE အကောင့်: wallstreetenglish_global နှင့် #KhaeWSETour hashtag သူ၏ Instagram အကောင့်အပေါ်သူ၏အာရှ Adventures ကိုလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။
နီကိုးလ် (Khae) နှင့် WSE 2017 ခုနှစ်တွင်ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနှင့်ကျော်ကြားသောအနုပညာရှင်အဖြစ်ချီးကျူးခဲ့သည်။
"။ ထိုင်းနိုင်ငံအဘို့, နီကိုးလ်တက်ရောက်ခဲ့သည်သမျှသောအရပ်တို့ကိုကြီးမြတ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုကြောင့်ကျောင်းသားများနှင့်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ကောင်းသောတုံ့ပြန်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ဦး၌မွေ့လျော်ခဲ့သောမျှော်မှန်းထားသည်ထက်အများကြီးပိုကျောင်းသားများကိုရတယ်ခဲ့ကိုချစ်ခဲ့ .. " - မစ္စစ် Pamanee Lefèvre, စျေးကွက်၏ဒါရိုက်တာ WSE ထိုင်း
"ကျွန်မရုပ်ရှင်နှင့် ဆက်စပ်. ခံစားရနှင့်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌တွေ့ဆုံရန် Khae နိုင်ခဲ့ပိုမိုဖတျရှုသိရန်လိုခငျြစစ်မှန်တဲ့လာမယ့်အိပ်မက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ " - ကျောင်းသားသံအမတ်ကြီး WSE ထိုင်း Rangsit
နီကိုးလ် Maxali အကြောင်း
နီကိုးလ် Maxali ဖန်တီးမှု / သဘင် / စာရေးဆရာစိတ်ခွန်အားနိုးပီဖြစ်လာခဲ့သည်ဆက်သွယ်ရေး / ဖြစ်ရပ်များမန်နေဂျာဟောင်းတစ်ဦးသတင်းထုတ်လုပ်သူ / ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ တ-အမျိုးသမီးတစ်ဦးပြပွဲနီကိုးလ်စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်ရပ်တည်မှုထူထပ်နှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လျှောက်လုံးခရီးထွက်ခဲ့သည်။ သူသည်လက်ရှိတွင်အမျိုးမျိုးသောကြော်ငြာအတွက်နယူးယော့ခ်စီးတီးရှိဖျော်ဖြေနှင့်အမေရိကန်ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်များအဘို့မိမိဟာသဇာတ်လမ်းမှာလေယာဉ်မှူးတင်ပြနေပါတယ်။ nicolemaxali.com
အာရှရန်သူ၏ခရီးစဉ်နှင့်တွေ့ဆုံရန် Instagram ကိုပေါ်နီကိုးလ်ကိုလိုက်နာပါ! https://www.instagram.com/nicolemaxali/
က Wall Street Inglésအကြောင်း
က Wall Street Inglés (WSE) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအင်္ဂလိပ်ပညာရေး၏အကြီးဆုံးပံ့ပိုးပေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2018 ခုနှစ်, WSE ကမ္ဘာတဝှမ်း 28 နယ်မြေများတွင် 400 ကျော်စင်တာများ operated ။ www.wallstreetenglish.com
က Wall Street အင်္ဂလိပ်
UsOur အင်္ဂလိပ်သင်တန်းများအင်္ဂလိပ်သင်ယူသိကောင်းစရာများနှင့်အတူအင်္ဂလိပ် Learn
WSE အတွက် FranquiciasOportunidades ပညာရှင်များ
nosotrosConozca အကြောင်း equipoNuestras နေရာများ
မူပိုင်ခွင့်© 2018 WSE ဟောင်ကောင် Limited တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ All rights reserved ။
CookiesMapa webPolíticaဆိုက်ကို၏သီးသန့်လုံခြုံရေး PolicyIntellectual ၏ဆိုက်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
myanmar esteem esteemapp writing language